ग्राहक पहिचान फाराम किन बारम्बार भराइन्छ ? - Karobar National Economic Daily
ग्राहक पहिचान फाराम किन बारम्बार भराइन्छ ?
query_builderJune 25, 2017 9:44 AM supervisor_accountविनोद नेपाल visibility3239
आधुनिक प्रविधिको विकास तथा यातायात र सञ्चारको सुविधाले विश्वलाई साँघुरो बनाइरहेको छ । खुला बजार अर्थतन्त्र र उदार व्यवस्थाका कारण पनि विश्व झन्झन् साँघुरिँदै छ । विश्वव्यापीकरणले अवसरहरूको सिर्जना गरेको छ, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको स्थापना र सञ्चालन भएको छ ।
मुलुकहरूबीच पारस्परिक सम्बन्धका साथै अन्तर्निर्भरता बढाएको छ । प्रविधिको प्रयोग, दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता आदि सम्भव भएको छ । यसै गरी मानिसहरूको हिंडडुल र सम्पर्क बढेको छ । यद्यपि राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर अर्थतन्त्रका कारण हामीले यसबाट धेरै लाभ लिन भने सकेका छैनौं ।
विश्वव्यापीकरणकै कारण एक मुलुकको नागरिक अवसरको खोजीमा अर्को मुलुकमा जाने क्रम बढेको छ । दक्ष र क्षमतावान्हरूले प्रतिभा देखाउन र अवसरको लाभ लिन सकेका छन् । यसरी विश्वव्यापीकरणले विभिन्न क्षेत्रमा लगानीका अवसरहरू पनि सिर्जना गरेका र सम्भव पनि भएका छन् ।
पेसा, व्यवसाय र रोजगारीका लागि मुलुकहरू खुला भएका छन् तर यसले विभिन्न किसिमका जोखिमहरू पनि बढाएको छ । यसैको परिणामस्वरूप वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने युवाहरूको संख्या झन्डै ५० लाख पुगिसकेको छ ।
यस्तो अवसरको लाभ विभिन्न आपराधिक तŒवले पनि लिएका छन् । त्यस्ता तŒवले खुला र उदार नीतिको दुरुपयोग गरेका छन् । त्यस्ता तŒवबाट लागु औषध कारोबार, प्रतिबन्धित वस्तुको तस्करी, मानव तस्करी तथा आतङ्कवादका अतिरिक्त वित्तीय अपराधहरू पनि भएका छन् । पेसा, व्यवसाय र रोजगारीको आवरणमा विभिन्न किसिमका अपराधहरू हुने गरेको छ । यसैले विश्वव्यापीकरण एकातिर अवसर र अर्कोतिर चुनौतीको रूपमा रहेको छ ।
अपराध र धन परस्पर जोडिएका हुन्छन् । प्रायः अपराधहरू धन वा सम्पत्तिकै लागि हुन्छन् । कुनै पनि अपराधको लागि धन आवश्यक पर्ने र सामान्यतः गलत कामका लागि वैध आर्जन खर्च नगरिने भएकाले अवैध आर्जन गर्ने र त्यस्तो आर्जन आपराधिक कार्यमा प्रयोग गर्ने प्रचलन बढेपछि त्यो मानव सभ्यताकै लागि चुनौती बनेको छ ।
त्यस्तो गतिविधिमाथि नियन्त्रण गर्न नसके सभ्यतामाथि नै प्रश्न चिन्ह लाग्ने भएकाले त्यस्तो अवस्थाप्रति विश्वको ध्यान जान थालेको छ । यसै क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका लागि विभिन्न प्रयासहरू हुन थाले ।
कतिपय मुलुकले आफ्नो मुलुकमा आर्थिक कारोबारमा कडाइ गर्न थाले । यस्ता कार्यमा निगरानी गर्न क्षेत्रीय र विश्वस्तरमा नै संघसंस्था खुल्न थाले । यसरी थालिएका प्रयास नै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र आपराधिक तथा आतङ्कवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणका प्रयास हुन् ।
पछिल्लो एक तथ्याङ्क अनुसार विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ देखि ५ प्रतिशत अर्थात् २ ट्रिलियन अर्थात् २ हजार अर्ब डलर सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणले मूल्यको नोक्सानी गर्नुको सार्थ आर्थिक अपराध गर्ने बताइन्छ । बढ्दो आतङ्कवादी घटनासँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारीको पैसाको स्रोतबारे पश्चिमी देशहरूमा कडा निगरानी भइरहेको छ ।
अपराधीहरूले यस्तो कार्य अनेक किसिमका झुटको आडमा सत्य जस्तो देखाउँदै अर्बौं डलर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमार्फत् उपयोग गर्न सफल भइरहेका छन् । वित्तीय संस्थाहरूले अर्काको स्वामित्वमा रहेको नगद वा सम्पत्तिको व्यवस्थापन र नियन्त्रण आफ्नो साथमा राख्ने हुँदा दुरुपयोग हुने सम्भावना अधिक हुन्छ । यसैले आम्दानीको स्रोत तथा व्यक्तिको परिचयपत्र अनिवार्य राख्नुपर्ने भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यतालाई सबै देशले गम्भीर रूपमा अँगाल्नुपर्ने हुन्छ ।
सम्पत्ती शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरू भइरहेका छन् । विभिन्न मुलुकहरूले यस सम्बन्धमा आआफ्ना ढङ्गले केही प्रयास गरेका भए पनि सन् १९८९ मा स्थापित ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ तथा सन् १९९७ मा गठन भएको ‘एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनि लन्डरिङ’ आदिलाई लिन सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक आदि यसका लागि भएका थप काम हुन् ।
नेपालको सन्दर्भमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण ऐन, २०६४ जारी भएको छ । यो नै यस क्षेत्रका लागि भएको संस्थागत एवं कानुनी प्रयास हो । ऐनलाई समयानुकूल बनाउने क्रममा यस ऐनमा पहिलोपटक वि.सं २०६८ र दोस्रोपटक २०७० मा संशोधन गरियो । ऐन बमोजिम नै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग गठन भएको छ ।
मुलुकको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकमा वित्तीय जानकारी एकाइ गठन भई यसले शुद्धीकरण सम्बन्धी कार्यहरू गरिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी गर्ने एकीकृत निर्देशनको निर्देशन नं १९ मा यस सम्बन्धी विषय समावेश रहँदै आएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सोही ऐन तथा निर्देशनको अधीनमा रही सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी नीति निर्माण तथा अद्यावधिक गर्दै सोही निर्देशन बमोजिम आआफ्ना कारोबारलाई सुव्यवस्थित गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय ग्राहक पहिचान (केवाइसी) सम्बन्धी विषय निकै चर्चामा छ ।
जोखिमसँग खेल्नुपर्ने भएकाले ग्राहकको पहिचान सामान्य विषय हो । कुनै पनि कारोबार ग्राहकको राम्रो पहिचान गरेर मात्र गर्नुपर्छ । एकपटक पहिचान गर्ने मात्र होइन ग्राहकको अवस्थाबारे अद्यावधिक जानकारी राख्ने र तिनको कारोबार बारे निरन्तर निगरानी राख्नुपर्छ ।
तिनका विवरण अद्यावधिक गर्ने, परिष्कृत ग्राहक पहिचान, जोखिम मूल्याङ्कन र सोही अनुसार ग्राहकको वर्गीकरण गर्ने जस्ता काम निरन्तर हुनुपर्छ । यो हामी सबैको लागि आवश्यक र अनिवार्य काम हो । बैंकको हकमा त आफ्नो प्रतिष्ठा जोगाउने र व्यवसायलाई निर्बाध ढङ्गमा निरन्तरता दिने दृष्टिले पनि यो जरुरी विषय हो ।
आफ्ना ग्राहकको बारेमा जानकारी नराख्ने तथा शंकाश्पद र प्रतिष्ठित ग्राहकको पहिचान नगर्ने संस्थाहरूले करेस्पोन्डेन्ट बैंकसँगको कारोबार गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने हुँदा यसबाट बैंकहरूको कारोबार नै सङ्कुचित हुन जान्छ ।
अपराधी र तस्करहरूले राजनीतिक अस्थिरता तथा कमजोर कानुनी व्यवस्था भएको मुलुकलाई आफ्नो आश्रयस्थल बनाउन चाहन्छन् । हामी लामो समयदेखि त्यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौं । त्यसैको फाइदा त्यस्ता तŒवहरूले उठाउँदै आएका कुरा विभिन्न घटनाक्रमहरूले देखाएकै छन् । यसबाट पनि हामी विशेष सजग हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
हाम्रा कानूनहरूमा थप कडाइ र तिनको कार्यान्वयनमा तदारुकता अनिवार्य र अपरिहार्य छ । वित्तीय क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विशेष कडाइका साथ कुनै पनि रकमको बारेमा सोधखोज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
हाम्रो मुलुक र हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुनै पनि रूपमा आतङ्कवाद, तस्करी, भ्रष्टाचार, राजस्व छली वा कुनै पनि किसिमको अपराधजन्य र अवैधानिक कार्यले आर्जित धनलाई शुद्धीकरण गर्ने माध्यमको रूपमा कसैले प्रयोग गर्न नसकोस् । यसका लागि सम्बन्धित निकायको निरन्तर निगरानी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको इमानदार प्रयासको खाँचो छ ।
यातायात अर्थतन्त्र सञ्चार